Sawirro: Kulan taariikhi ah oo London ku dhexmaray nin ugu dheer & ninka ugu gaaban dunida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 13 November 2014 13 November 2014
Mareeg.com: Magaalada London ee dalka Britain ayaa xalay waxaa ka dhacay kulaan taariikhi ah, kaasoo dhex maray ninka ugu gaaban & ninku ugu dheer dunida, iyadoo lagu soo beegay xuska sanad guuradii 60-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay Boogga “Guinness World Record” ee lagu qoro waxyaabaha cajiibka ah.
Ninka ugu dheer dunida oo lagu magacaabo, Sultan Kösen oo dhirirkiisa lagu sheegay 2.44 Mitir, iyo Chandra Dangi, oo lagu qiyaasay 55 centimeters ayaa sawirro ku galay banaanka hore ee aqalka baarlamaanka dalka UK.
Sida uu qoray wargeyska Dailymail, labadan nin ayaa ka mid ah boqolaal kale oo xuska ka qeybgalay, kuwaasoo horay u dhigay rikooro kala duwan.
Mr Kösen, oo 31 jir ah, dhirirkiisuna yahay 2.44 Mitir kana soo jeeda magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sanadkii 2009 noqday ninka ugu dheer dunida kadib markii uu ka dheeraaday ninka 63 jirka ah ee lagu magacaabo Xi Shun, oo dhirikiisu noqday 2.36 Mitir, kaadoo kasoo jeeda dalka Shiinaha.
Chandra Dangi, oo lagu qiyaasay 55 centimeters ayaa gaabida ka qaaday ninka lagu magacaaboGul Mohammed, oo kasoo jeeda magaalada New Delhi ee dalka India, waxaana dhirirkiisu noqday 57 centimeters.
Nabadsugida oo xalay u dhacay Guri ku yaal degmada Dharkeenley, lagana helay waxyaabaha qarxa